iFont Donate 5.9.8.4 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.9.8.4 လြန္ခဲ့ေသာ4ပတ္က
Application မ်ား စိတ္ႀကိဳက္ျပဳျပင္ျခင္း iFont Donate
iFont Donate ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Android ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဖောင့် Installer ကိုပြန်လာနေပါသည်!
ဒီ app ကိုသင့်ဖုန်းပေါ်မှာလှပတဲ့စာလုံးတွေတပ်ဆင်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်။ သင်သည်သင်၏ဖုန်းကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်လာစေရန်စာလုံးတွေရာပေါင်းများစွာကို download လုပ်ပါနဲ့ကိုသုံးနိုင်သည်။ အဲဒါကို 'စနစ်က font ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လွယ်ကူသော့! တင့်တယ်စာလုံးတွေ, တင့်တယ်စိတ်ဓါတ်များ!
သင်သည်သင်၏ဖုန်းကိုထူးခြားတဲ့အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ပိုပြီးလှပဖြစ်လာသည်စေမလဲ? စနစ်က font ကိုပြောင်းလဲဖို့အဲဒါကို 's ကိုလွယ်ကူချင်ပါနဲ့။ လက်ရာမြောက်သောချစ်စရာကောင်းတဲ့ font ကို၏ပေါင်းစည်းရာပေါင်းများစွာအလွယ်တကူစနစ် font ကို, ရိုးရှင်းသောပြောင်းလဲမှုစိတ်ဓါတ်များကိုပြောင်းလဲ! ငါလွှမ်းမိုးကိုယ်ပိုင်ဖောင့်အပွင့်လည်း,! ဒီတော့ငွီးငှေ့ဖှယျဖုန်းကို interface ကိုကြည့်ရှု! သငျသညျ, နေ့တိုင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာဘဝကိုပျြောရှငျတဲ့စိတ်ဓါတ်များရှိငါစိုးမိုးကိုယ်ပိုင် fonts.Font ပွင့်, ကိုချစ်ပါစေ! ဒီတော့ငွီးငှေ့ဖှယျဖုန်းကို interface ကိုကြည့်ရှု! သငျသညျနေ့တိုင်းတစ်ဦးသည်မင်္ဂလာစိတ်ဓါတ်များကြကုန်အံ့။
သင့်ရဲ့ဖုန်းကို အဘို့အ handpicked စာလုံးတွေရာပေါင်းများစွာ
★★★★ပံ့ပိုးမှုက Galaxy S3 ကို, S4 ကို, မှတ်စု, Root ပြောင်းလဲမှု font ကိုမပါဘဲ Note II, reboot လိုအပ်ချက်များကိုမပါဘဲ! ★★★★
ကျယ်ပြန့်မှုစနစ်တပ်ဆင်ရန်ထုံးစံဖောင့်ရာပေါင်းများစွာကနေကို Select လုပ်ပါ! ကို Preview, backup လုပ်ထား, SD ကဒ်ကနေ install နှင့်သင့်စာလုံးတွေမျှဝေ။
Samsung ကအခြား font ကိုကန့်သတ်ထားသောကွောငျ့သငျသညျ '' ဖောင့်ကိုထောက်ခံမ '' မြင်ရလျှင်★★★★, သင်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအမြစ်တွယ်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ★★★★
ပံ့ပိုးမှုကိုရီးယား, ဂျပန်, အာရဗီ, ရုရှား, ပြင်သစ်, စပိန်, ဗီယက်နမ်, မြန်မာ ... font ကို
သင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုပြောင်း, အ font ကိုပြောင်းပေးပါ!
1.Support က Samsung, Xiaomi (MIUI), Meizu, Huawei (Emotion UI ကို) ဖုန်းကိုစုံလင်သောအစားထိုး font ကို
2.Support HTC, Sony, Motolora ဖုန်းကိုအစားထိုး font ကို (Root လိုအပ်)
ထိုစာလုံးအရွယ်အစားပြုပြင်မွမ်းမံဖို့ 3.Support, ထုံးစံဖောင့်အဘို့ထောက်ခံမှု
အငွီးငှေ့ဖှယျခြေလှမ်းများဖယ်ရှားပစ်, လုပ်ကိုင်ရန် 4.Easy ။
5.Automatic backup လုပ်ထားစာလုံးတွေအလွယ်တကူစက်ရုံ font ကို restore
6.Change စာလုံးအရွယ်အစား, အသေးစားကနေကြီးမားတဲ့အရွယ်အစားပါစေ။
သငျသညျအခမဲ့ app ကို iFont သုံးပြီးပျော်မွေ့လျှင်ဤလှူဒါန်းမှု app ကိုဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့်စီမံကိန်းလှူဒါန်းခဲ့စဉ်းစားပါ။ အားလုံးရန်ပုံငွေများ app ကို compatibility နှင့်အတူကိုကူညီကွဲပြားခြားနားတဲ့ Android ကိုဟန်းဆက်ဝယ်ယူမျက်နှာသို့သွားပါလိမ့်မယ်။
iFont Donate အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
iFont Donate အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
iFont Donate အား အခ်က္ျပပါ
d0ss စတိုး 32.71k 6.76M
iFont Donate ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း iFont Donate အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.9.8.4
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://ifontapp.blogspot.com/2017/02/privacy-policy.html
App Name: iFont Donate
Release date: 2019-08-20 23:40:03
လက်မှတ် SHA1: 97:A6:74:41:21:44:7F:E5:4F:20:58:8F:82:02:13:16:3B:1B:54:BC
ထုတ်လုပ်သူ (CN): kexuejin
အဖွဲ့အစည်း (O): vivi
iFont Donate APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ